नेपालको व्यवस्था बदलिए तर अवस्था भने रहयो जस्ताको जस्तै | onlineharpal.com
on: २ आश्विन २०७३, आईतवार १२:२२ In: बिचार
– सन्तोष चोखाल
मैले आफ्नो मनमा लागेका केही कुरा लेख्ने प्रयास गरेको छु । मलाई यो नसोच्नुस कि म कुनै पार्टीको मान्छे हो । म एक स्वतन्त्र युवा हो । आज देशमा अस्थिरता छ, अराजकता छ । अाखिर यो कहिलेसम्म र कहाँसम्म ? म एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले ठण्डा भएर सोच्दैछु । तपाईंहरु पनि सोच्नुस त ? कति सरकार परिवर्तन यो देशमा ? देशमा व्यवस्था बदलियो तर अवस्था बद्लिएन । भुकम्प पीडितहरु ओत छेक्ने पाल नपाएर खुला मैदानमा लडिरहेका छन् । नेपाललाई प्रकृतिदेखि छिमेकीसम्मले मज्जाले रुवाइसके । तर घैटोमा घाम लाग्ने कहिले ? किन पीड़ाको महशुस हुँदैन ।
देशको लागि लडिरहेका सिपाहीहरुलाई जीउदै आगो लगाएर क्रुर हत्या गरियो । तर देशमा सधै सधै फोहोरी सत्ताको खेल, फोहोरी राजनैतिक धन्दा चलिरह्यो । केही समय अगाडि अफगानस्तानकाे काबुल हमलामा १३ जना वीर गोर्खालीको निधन भयो । दैनिकजसो एअर्पोर्टमा काठका बाकसमा लास आइरहेका छन् । अहिले भोटेकोसीले सिन्धुपाल्चोक तथ अन्य ठाउहरु तहस नहस बनाएको छ खोइ पिर चिन्ता कसलाई छ ? यो सत्ताको खेल कहिलेसम्म ? हुन त यो अवस्था सिर्जना गर्ने हामी वीर नेपाली जनता नै हौ । हामीलाई कसैको नजिकको बनिदिनु पर्ने ।
हामीलाई मन्त्रीको दाहिने हात लिनुपर्ने । हामीलाई पार्टीको झण्डा ओडनै पर्ने, अनि कहिले बन्ने देश ? जनता धनी तर देश गरिव । तपाईंलाई स्मरण रहोस् । जापान ज़स्तो विकसित देश धनी छ तर जनता गरिव छन् । जनतालाई पाल्न सक्ने हैसियत देशसँग छ । तर हाम्रो नेपाल- हामी सबै परिवर्तनको नारा लगाउछौ, यो भएन्, त्यो भएन भन्छौ तर पार्टीको झण्डा ओडेर हिड्न हतार छ हामीलाई । यदि देश बनाउने नै हो भने किन राम्रो पार्टीलाई बहुमत दिइदैन । हाम्रो देशमा नौ महिने सरकार कहिलेसम्म ? हामी नेपालीलाई धेरै ठुला विप्पतीलेसम्म झापड दिइसकेको छ ।
जे भए पनि सत्ता फेरियो, मान्छे फेरिए तर देशको आजसम्म मुहार फेरिएन । किन हामी चुप छौ । सामाजिक सन्जालमा हामी दोहोरी पनि खेल्छौ तर हामीलाई पार्टीको झण्डा नओडि जीवन चल्दैन । कहिलेसम्म बोक्ने पार्टीको झण्डा ? म कसैको समर्थक पनि होईन र न त कसैको विरोधी पनि । न त म एमालेको समर्थक , न त माओवादीको , न त कांग्रेसको । म एक स्वतन्र नेपाली । यो देशमा सधै सधै नौ महिने सत्ता बाँड़ीचुँड़ी बनिरहने भो अनि कहिले हुन्छ देशको विकास ? हामीलाई भारतले धेरै पीडा र दुःख दिइसकेको छ तर हामीलाई भारतसँग हात नजोडी न हुने । यसको दोष कसलाई दिने नेतालाई या सरकार लाई ? कसैलाई यसको दोस दिने होइन, दोषी हामी जनता हौ । यो देश बिग्रनुको दोषी म हो । म जस्ता लाखौ युवाहरु हौ । हामीले अझै पनि बुझ्न सकेनौ । सरकारको नेतृत्व कर्ताहरुलाई । कहिलेसम्म नबुझ्ने । अब हामी जनताले अरुलाई दोष दिने होइन ।
यो देशमा २६ वर्ष मा २२ वटा सरकार फेरियो तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा ! यसरी चल्छ कहिलेसम्म ? हुन त हाम्रो सानैदेिख लागेको बानी कसैले राम्रो गर्छ भने उसको पक्कै विरोध गरिन्छ अझ सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा कोही माथि पुग्छ भने खुट्टा तान्न्ने जन्मिहाल्छ । यो रोग देशमा रहेका नेपालीलाई मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपालीमा पनि ब्याप्त छ । यो रोगले विकराल अवस्था लिइसक्यो तर हामी मौन छौ । हामीले राम्रो कुरामा आवाज उठाउदैनौ तर पार्टीको झण्डा बोकेर हिड्नु पर्‍यो भने हामी तयारी छौ । यो रोग ममा छ । हामी सबैमा छ । देशमा महिनैपिच्छे सरकार फेरियोस, मलाई सरोकार छैन । तर मेरो देशमा स्थिरता किन आएन ? कहिले आउछ स्थायित्व ? कहिले बन्छ देश आत्मनिर्भर ? कहिलेसम्म हामीले अरुसँग भिख मागिरहने ? देशमा राणाा पछि पंचायत आयो, बहुदल आयो, लोकतन्त्र आयो अनि गणतन्त्र पनि आयो ।
खोइ देशको परिवर्तन ? कहिले हुने देशको परिवर्तन । जो जति आए पनि राम्रोसँग देखिएका अनुहारहरु हुन । किन पटक पटक यिनैलाई सत्ताको साँचो सुम्पिदिन्छौ हामीले ? हुन त यो पढ्दा पढ्दै कोही कोहीलाई रिस पनि उठ्ला तर म कसैप्रति पनि आक्रोश होइन, यो देशको जिम्बेवार युवा हुँ । भुकम्पमा प्राप्त सहयोग के कसरी कुन ठाउँमा सदुपयोग गर्ने कुनै योजना आजसम्म छैन । विभिन्न ठाउँमा रिक्त पदमा राम्रालाई होइन, अनुभव र योग्यतालाई होइन मेरो र हाम्रालाई भर्ना गर्ने चलन छ । साच्चै नेपाल त यस्तो भएको छ, जहाँ जसले जे गरे नि हुने, कुनै चिजको थोक मुल्य रहेन ।
मोटाउने दैनिक मोटाउदै गएका छन, दुब्लाउने दैनिक दुब्लाउदै , थिचिदै गएका छन । धनी झन झन धनी, गरिव झन झन गरिव । नेपालमा समानता कहिल्यै हुने भएन । खानेले खाएको खायै गर्ने, हेर्नेले हेरेको हेरै गर्ने । कुनै पनि चिजको मुल्य रहेन चाहे जे पनि गर्न सक्ने भए । इतिहासले धिकारी सक्यो । नेपाल अघि होइन, पछि पछि धकेली सक्यो । राम्रा कुरा होइन, दैनिक नराम्रा कुराले बजार लिइसक्यो । हामी जनता धेरै जान्ने छौ, धेरै बुझ्ने छौ तर आफ्नो लागि । आफ्नो लागि त जसले पनि गर्न सक्छ, देशको लागि केही दिने कि ? यो देशमा अन्योलता नै अन्योलता छ । यो अन्योलता , यो अस्थिरता कहिलेसम्म ? कुन युगसम्म ??? (लेखक पत्रकार तथा नेपाल जापान विद्यार्थी समाजका अध्यक्ष हुन)
२६ आश्विन २०७३, बुधबार १६:४४